ဘယ်ကောင် ဖွန်ကြောင်တာလဲ သေသွားမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်ကောင် ဖွန်ကြောင်တာလဲ သေသွားမယ်
ဘယ်ကောင် ဖွန်ကြောင်တာလဲ သေသွားမယ်
Posted by manawphyulay on Aug 12, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |6comments
အသိပညာဗဟုသုတ အသိ၊ သတိ
ချယ်ရီရောဘတ်စ်ဟာ အသက်(၆၈)နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည် ဒေးဗစ်ရောဘတ်စ်တစ်ယောက် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်၊ အင်တာနက်သုံးပြီး အချိန်ကုန်နေတာကို မသင်္ကာ ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ယောက်ျား ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာ ချယ်ရီက အမြဲတမ်း စူးစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက် အဖိုးကြီးဟာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆီ Sexနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Messageတွေ ပေးပို့နေတယ်ဆိုတာ သိလာရပါတယ်။ ဒေးဗစ်ရဲ့ Messageတွေဟာ မိန်းကလေးငယ်တွေကို သွေးဆောင်တဲ့ စကားလုံး ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေ ပါနေပြီး ဒီလိုလုပ်နေတာ တော်တော်ကြာပြီဆိုတာ အသက်(၆၁)နှစ်အရွယ် ချယ်ရီတစ်ယောက် သိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်တော့ ချယ်ရီဟာ သူ့ယောက်ျားရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် တုန့်ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်လာပါတော့တယ်။ ချယ်ရီဟာ သူ့ကိုယ်သူ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို ဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနောက်တော့ အိမ်ထောင်သက် နှစ်(၂၀)ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည် အမြဲဝင်ပြီး မြူးနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် Chatting ၀က်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ပြီး ဒေးဗစ်ကို အရောဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ချယ်ရီဟာ သူ့ယောက်ျား ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ပြဿနာ မရှာခဲ့ပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ တခြားကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကိုသုံးပြီး ဒေးဗစ်ရဲ့အခန်းနဲ့ နံရံတစ်ချပ်သာ ခြားတဲ့နေရာကနေ သူ့ယောက်ျားကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ချယ်ရီဟာ သူ့ကိုယ်သူ (၁၄)နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ကောင်မလေးအနေနဲ့ ဒေးဗစ်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ပို့ခဲ့တဲ့ သူ့ယောက်ျားရဲ့ Messageတွေကို ချယ်ရီတစ်ယောက် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ Messageတိုင်းမှာ ဒေးဗစ်ရဲ့ Nicknameဖြစ်တဲ့ Corkyဆိုတဲ့ နာမည်ကို လက်မှတ်ထိုးထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ပိုဆိုးတာက ဒေးဗစ်ဟာ တစ်ဖက်ကသူကို တကယ့်မိန်းမပျိုလေးထင်ပြီး Webcamကနေတဆင့် Sexနဲ့ဆိုင်တဲ့ မဖွယ်မရာ အပြုအမူတွေ လုပ်ပြနေခဲ့တာပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဒေးဗစ်က မိန်းကလေးလို့ ထင်နေတဲ့ သူ့မိန်းမကို အပြင်ခေါ်ပြီး Sexကိစ္စ လုပ်ငန်းစဖို့ ပြောလာတဲ့အခါ သည်းခံစိတ် ကုန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ချယ်ရီက ရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗြိတိန်အမျိုးသား ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (NSPCC)ကိုလည်း ထပ်ပြီးတော့ သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ရဲတွေရောက်လာပြီး ဒေးဗစ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို စစ်တဲ့အခါ ကလေးတွေရဲ့ ၀တ်လစ်စားလစ် တရားမ၀င် ဓာတ်ပုံတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒေးဗစ်က တခြားအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ငြင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးပေမယ့် ချယ်ရီက ရဲတွေကို သူ့ဆီရောက်လာသမျှ ဒေးဗစ်ရဲ့ Messageတွေနဲ့ Webcamကနေ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဒေးဗစ်လုပ်ပြနေသမျှ မဖွယ်မရာပုံရိပ် ဗီဒီယိုတွေကို အပ်နှံလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ သူChattingကနေ အပီကြူနေတာ သူ့မိန်းမမှန်း ဒေးဗစ်တစ်ယောက် သဘောပေါက်သွားပြီး ကြက်သေသေနေခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးက ဒီအမှုကို စစ်ဆေးနေပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် နံရံခြားပြီး Messageတွေ အပြန်အလှန် ပေးပို့နေခဲ့တာကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒေးဗစ်ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီး သားသမီးတွေ ရှိသူဖြစ်ပြီး တရားရုံးမှာတော့ သူဟာ ကျောင်းသူမိန်းကလေးတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေးရရင် လိုချင်တဲ့စိတ်တော့ ရှိခဲ့ပါတယ်လို့လည်း ဒေးဗစ်က ၀န်ခံထားပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ကားဒစ်ဖ်ခရောင်း တရားရုံးက ဒေးဗစ်ရဲ့ Sexနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကို ဇနီးကိုယ်တိုင်က မျက်မြင်ဖြစ်နေတာကြောင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲချက်တင်ပြီး ဒေးဗစ်ကို ထောင်ချဖို့ထိ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် လျှော့ပေါ့ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေ (၃)နှစ်လုပ်ဖို့ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ အသက်(၁၈)နှစ်အောက် ဘယ်ကလေးသူငယ်နဲ့မှလည်း နီးနီးစပ်စပ် နေခွင့်မရတော့သလို Sexနဲ့ပတ်သက်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသူအဖြစ်လည်း (၅)နှစ်ကြာ စာရင်းသွင်းခံထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတရားခွင်မှာပဲ ချယ်ရီရဲ့ လျှောက်ထားမှုကို တရားသူကြီး ခရစ္စတိုဖာ ဗော့စ်ပါက လက်ခံပြီး လင်မယားကွာရှင်းဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ချယ်ရီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပါတ်က ကွာရှင်းမှု ပြီးကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဝေလပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်နေတုန်းပါ။ သူက ခင်ပွန်းဟောင်းရဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျွန်မ စီရင်ချက်ကိုကြားတော့ တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားသူကြီးဟာ ခက်ခဲတဲ့ အမှုတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒေးဗစ်ဟာ ထောင်ထဲရောက်သင့်သူပဲ။ ကျွန်မသူ့ကို ခုထိစိတ်ဆိုးတုန်းပါ။ ဒေးဗစ်ကို လက်ထပ်ခဲ့တုန်းက ဒီလိုလူစားမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မလုပ်ရပ်အတွက် နောင်တမရပါဘူး။ အမှန်ကန်ဆုံး လုပ်ခဲ့တာလို့ ယုံပါတယ်။ ခုတော့လည်း ဒီအဖြစ်တွေကို ကျွန်မဘ၀ရဲ့ အတိတ်တစ်ခုအဖြစ် ချန်ထားလိုက်ပါပြီ”လို့ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
အဘွားကြီးရဲ့ သတ္တိနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုတော့ တကယ် ချီးကျူးတယ် ရှယ်ဘဲ။
ဒီလိုပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လေနော်….. သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေပါပဲ။
တကယ့်အပြင်းစား lady ကြီးပဲ ချီးကျူးတယ် သူ့စိတ်ဓါတ်ကို ….ဒီက lady တွေလဲ သူ့ကိုအတုယူ ပြီး online မှာ Q နေတဲ့လူပြိုကြီးတွေကိုပညာပေးသင့်တယ်….
ကလေးသူငယ်တွေကို လိင်ကိစ္စသွားပြော၊ဆက်ဆံရင် လူသတ်မှုနီးပါးလောက်အပြစ်ကြီးပါတယ်။
ထောင်ကျတဲ့အပြင် အန္တရာယ်ရှိသူအဖြစ်လည်း စာရင်းသွင်းခံရတတ်ပါတယ်။ စာရင်းဝင်သွားရင် နီးရာရဲစခန်းကို သွားသွားသတင်းပို့နေရတော့တာပါပဲ။
အဲဒါမျိုးက တသက်တာ မှတ်တန်းထဲဖျက်မရဖြစ်ပြီး ဘ၀တလျှောက်လုံး ဘာလုပ်လုပ် အဲဒါပြန်ပြန်ပေါ်လာပြီး ဒုက္ခရောက်စေတာပါပဲ။
အလုပ်လျှောက်တာတို့။ အိမ်ငှားတာတို့အထိ တောက်လျှောက်ပြသနာတက်တာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို ပြသနာတွေရှိနေပြီလား…သိချင်သား…။
Child pornography is crime and it is considered as the biggest crime against humanity. When the matured adult tried to lure the innocent under-aged by any means, if you consider the child is yours ( I am just asking you to get empathy), will you agree that the mad guy who pry on the child should get the punishment of his life? You might want to chop him into pieces for harming your child in the most dehumanizing nature. The sex pest got the life time punishment which include daily miseries and self- shameful acts of variety until he died. Every aspect of his life becomes upside down. This sort of life-time harassments, manipulations, physical and mental harms until one dies is given damning sentence for political dissidents in Burma. Burma does not have the legislature to protect the child against sex exploitation. The lawless condition encourage the recruitments of child soldiers, child labours and to top the list of crimes committed by fascist army, the loss of children to sex rings is increasing problem. We must try our best to reinstall the lawful government and lawful society in Burma to protect our children from harm. Of course, we must united against the Junta to boycott the unjust election.